I-China CPL-Coil eya efektri yakwa-Coil Polishing Line nefektri | Zhongshuo
I-CPL isetshenziselwa ikakhulu ukususwa kwezinkinga ezincane ekubambeni okukhohlisayo kwe-SS emanzi, zithole ukuqeda ukuhlobisa, okungukuthi No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Okupholile kungaba yi-emulsion noma uwoyela wamaminerali. Ukuhlunga okupholile nohlelo lokuphinda usebenzise kabusha kubalulekile kulayini ophelele. I-ZS CPL yenzelwe ukugoqa amakhola okubandayo ukuze kuhlanganiswe ku-coil kusuka ku-100 kuye ku-1600 mm ububanzi nobukhulu phakathi kuka-0,4 kuye ku-3.0 mm. I-WUXI ZS futhi ihlinzeka nge-CPL eyomile. Kuzofakwa ibhande le-cork ukuze kutholwe ukuqeda kufana ne ...
I-CPL isetshenziselwa ikakhulu ukususwa kwezinkinga ezincane ekubambeni okukhohlisayo kwe-SS emanzi, zithole ukuqeda ukuhlobisa, okungukuthi No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Okupholile kungaba yi-emulsion noma uwoyela wamaminerali. Ukuhlunga okupholile nohlelo lokuphinda usebenzise kabusha kubalulekile kulayini ophelele. I-ZS CPL yenzelwe ukugoqa amakhola okubandayo ukuze kuhlanganiswe ku-coil kusuka ku-100 kuye ku-1600 mm ububanzi nobukhulu phakathi kuka-0,4 kuye ku-3.0 mm. I-WUXI ZS futhi ihlinzeka nge-CPL eyomile. Ibhande le-Cork lizosetshenziselwa ukuthola ukuqeda kufana nokuqeda kweScotch-Brite (SB), isivinini sokondliwa kwe-CPL eyomile kungaba yi-50m / min noma ngaphezulu.
Inzuzo ye-ZS CPL
1. Umhlinzeki we-Solution, i-ZS ihlinzeka ngomugqa ophelele kufaka phakathi i-Unwinder, Rewinder, Ukulayisha Imoto, I-Pinch Roll, i-Flattener, i-Crop Shear, uhlelo lokuwasha nokomisa, i-PVC coater. Ngasikhathi sinikela ngeFoodant Filtration kanye ne-Recycling System, i-Mist Collector, i-Fire Fighting System kanye nomshini wokugoba.
2. Akunasici kanye nomaki wokuxoxa kusuka kulayini
3. Umugqa wejubane ufike ku-40m / min max.
4. Umugqa ulungele ukukhiqizwa okuqhubekayo kwamahora angama-24
5. Izinga eliphakeme le-automation, okungukuthi, Umthwalo Ojwayelekile. I-Welding Seam Tracking System (ongayikhetha ngokuhlinzeka nge-welder)
6. Ukusebenza nokugcinwa okunobungane
Uhlobo lwezinto: Amakhoyili wensimbi angenasici
Amandla obunzima obukhulu:
Ubukhulu / ubuningi bezinto ezibonakalayo:
Ububanzi be-strip ububanzi / max:
Isisindo se-coil enkulu ekungeneni:
Ukungena kwe-coil yensitha engaphandle / max:
Ububanzi bokungena kwekhoyili:
Isisindo se-coil enkulu ekuphumeni:
Phuma ku-coil diamin min / max:
Phuma ku-coil diameter yangaphakathi:
m / imizuzu.
UMax. I-40 yokubuyisela emuva i -.5-35m / min yokuqhutshwa
Esedlule: I-SPL-Sheet to Sheet Polishing Line